Njem Nleta Obodo Laos: Shakekọrịta Obodo
Home » Njikọ Mkpakọrịta Akụkọ » Njem Nleta Obodo Laos: Shakekọrịta Obodo
Mmasị na njem nlegharị anya ime obodo nke dị na Asia Pacific emeela ka ọ pụta ìhè n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya, dị nnọọ ka nlọghachi obodo mere na 19thna narị afọ Victorian England, na maka ebumnuche ndị yiri ya. Ndị bi n’Eshia na-eto eto na-achọ ịgbanahụ nrụgide jupụtara na ha, ma na-abụkarị ndụ obodo, ma na-atụgharịkwu na oge ezumike na ezumike na ime obodo.
Agbanyeghị, Asia Pacific chere ọnọdụ dị iche taa karịa Thomas Cook na 1850. Iji chọpụta ihe a na-arịwanye elu, Huzhou City, China, na ndị Pacific Asia Travel Association (PATA) na World Tourism Organisation (UNWTO) ka ha nwee ike ịnabata nzukọ nke abụọ International Rural Tourism site na 16-18 July 2017, na Anji County, Laos.
N’emume mmeghe, PATA Chief Operator Officer Dale Lawrence nyere onye isi obodo Anji County Chen Yonghua onyinye nturu ugo nke International Rural Tourism Destination Base. A maara Huzhou na mpaghara Anji maka ugwu ndị nwere oke ọhịa, ụdị achara, tii na-acha ọcha, osimiri na ọdọ mmiri, pandas, na calligraphy.
Onye isi oche PATA Foundation Peter Semone weputara mbipụta UNWTO, "Report on International Rural Tourism Development: An Asia Pacific Perspect". Akwụkwọ ahụ nwere peeji 200 na-egosi ọmụmụ ihe banyere ebe 14 njem nlegharị anya na Asia Pacific, gụnyere Huzhou.
Maazị Semone, onye ndu edemede ahụ na onye isi na akụkọ ahụ kwuru, "Dịka 2017 bụ Afọ Mba Nile Maka Ọzụzụ Maka Ntugharị Na-aga n'ihu, anyị chọrọ ka akwụkwọ a lekwasị anya na omume kacha mma na atụmatụ na-aga nke ọma na mmepe mmepe nke ime obodo Asia Pacific."
Shen Mingqua, onye odeakwụkwọ nke Kọmitii Njem Nleta Anji County, nabatara ndị nnọchi anya 300-tinyere ndị si mba 15 karịa "Home of Asia Pacific Rural Tourism". Mazị Mingqua gosipụtara ihe ndị Anji rụzuru gụnyere ụzọ izizi njem njem ime obodo na naanị onye natara onyinye UN Habitat.
Maazị Mingqua kwuru, "Innovation bụ isi ihe ga - eme ka anyị nwee ihe ịga nke ọma… Anyị dị ka ihe nlere anya maka echiche ime njem ime obodo," na-ekwu na Anji na-anwa ịrata ndị igwe ojii. "Anyị chọrọ ka ụlọ ọrụ na-eleta ebe a maka nzukọ nọrọ ma hụ ebe ngwaahịa ha si na otu esi eme ha." Kọmitii ndị njem na-echekwa ezinụlọ maka ahụmịhe metụtara ọrụ ugbo.
Dr Ong Hong Peng kwurịtara banyere ngwaahịa ndị na-eme njem nlegharị anya n'ime ime obodo ma gosipụta na onyinye ndị nwere ike gafere n'akụkụ niile. "Usoro ngwaahịa dị iche iche dị iche iche ma nwee ike ịgụnye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile," onye bụbu Secretary General nke Malaysia Ministry of Tourism and Culture kwuru. O gosiputara "ulo ndi mmadu na-eme njem nleta nke ime obodo isii" nke nwere ime ulo maka onu ahia di oke onu ahia, ihe ndi ozo, niche ndi ozo, ememe na ihe omume, MICE, na omenala na ihe nketa.
Dr Peng wee webata ụlọ na ibi ndụ na ngwakọta. "Estlọ n'ụlọ dị mkpa maka ime njem ime ime obodo, mana ha ga-abụrịrị ndị na-akpali akpali… na-agbanwe agbanwe… iji tinye uru… Ọ nwere ike ịbụ ebe obibi niile, ebe ụfọdụ chọrọ nzuzo." Ọ tụrụ aro na "ngwakọ nke otu ọnụnọ obodo na obibi".
Onye isi oche Airbnb China An Li bịara tinyere ihe ọzọ maka ebe obibi ndị njem ime njem. “Airbnb bụ‘ ​​ihe niile maka otu ’’ njem nleta na akụnụba oke. Nkesa dị mma karịa ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ọtụtụ ndị ọbịa nwekwara ike isonye, Ha na-abụkarị ndị na-emefu ego buru ibu karị, ma na-achọ ezigbo ebe obibi. ” Oriakụ Li kwuru na ọrụ nkwụpụ si Airbnb na-agakwuru ụmụ nwanyị, ndị na-eto eto na ndị agadi.
Ihe gba ọtọ nke China na-enye okomoko dị mma n'akụkụ ahụmịhe obodo echetara echefu nke na-emetụta obodo. "Shanghai juru eju ma na-a wantụ sịga, ndị mmadụ chọrọ ezumike n'èzí obodo ahụ," ka Tolga Unan, onye isi njikwa ụlọ ọrụ ezumike ahụ kwuru. “Anyị na-ewe ndị ọrụ n’ọrụ ma anyị na ndị obodo na-arụkọ ọrụ ma na-amụta ihe n’aka ha na banyere ndụ ha. Ebumnuche anyị bụ ichekwa ma zuo ezu, ọ bụghị ịgbanwe. ”
Onye nhazi okwu na CCTV onye ọbịa Bai Yansong gbara agbamume na ime njem ime obodo abụghị naanị banyere ime obodo. "Obodo mepere emepe na-agbanwe-aghọ ndị ọzọ ime obodo-dị ka, site na ịmakụ a green gburugburu ebe obibi… Ọ bụghị naanị obodo mepere emepe ka ime obodo… na ọ bụ a ụzọ abụọ n'okporo ámá na-ejikọ na mbak."
Nzukọ ahụ wee gbanwee na mkparịta ụka mkparịta ụka na "ringkekọrịta Obodo", nke na-ebufe site na isi ihe ngosi. Onye ode akwukwo UNWTO nke Asia Pacific, Xu Jing, kwuru na mpaghara a abiawo na njem nke ime ime obodo, o ghaghi igbanwe ihe nlere ochie iji zute onodu aku na uba ohuru. “Ahụmahụ ahụ kwesịrị ịbụ eziokwu. Ọnọdụ ya nwere ike ịbụ obodo, mana ebe obibi bụ ebe obibi. "
Maazị Jing kwukwara, sị, “Ọbịa chọrọ ime ihe ndị obodo na-eme, ha chọrọ itinye ndụ ha bi n’obodo mepere emepe na akụkụ ime obodo life Ndụ ime obodo bụ nrọ maka ndị mepere emepe. Ha chefuru ihe ọ dị ka… ịnụ ụda nke okike na ịhụ kpakpando. ” O kwuru na ndị ime obodo, ndị kwagara obodo ahụ, na-agakarị n’obodo ha ma nọrọkwa ebe ahụ.
Dr Liu Feng, onye isi ndụmọdụ maka otu Beijing Davost Group, gara n'ihu, na-ekwupụta, "ndị bi n'obodo ahụ na-enwere ndị na-eleta anya ma ọ bụ laghachi n'ime ime obodo anyaụfụ." Ọ tụkwasịrị uche n'echiche Mr Yansong nke "ịgbanwe mmepe", na-achọpụta uto n'ime ụdị obodo. O kwuru, sị, "Ime obodo anaghị achọ ihe ọ bụla, ndị mmadụ chọrọ iweghachi ndụ ọdịnala." Ha jikọtara njem nleta ime obodo na ndụ obodo. Ọ bụ naanị nke onwe, obodo-dị ka ya, ma dịkwa mfe. ”
Mkparịta ụka ahụ laghachiri n'ime ime obodo, dịka onye isi oche PATA bụ Chris Bottrill wulitere imekọ ihe ọnụ na asọmpi ma ọ bụ "mmekọrịta mmekọrịta". “Inwe ha abụọ na-eme ka ngwaahịa a ka mma,” ka o kwuru, na-arụtụ aka na izi ezi nke ahụmịhe na ọdịiche. "Anyị kwesịrị ịkekọrịta ụzọ na ihe anyị na-amụta n'ime na n'etiti mba." Banyere nsogbu chere mmepe ime njem ime obodo, Maazị Bottrill kwuru na mgbe gị na ndị ime obodo na-arụkọ ọrụ, ọ dị gị mkpa oge, ntụkwasị obi, na nkwanye ugwu… "Ọ bụghị naanị 'UNESCO' na-adọta ndị ọbịa."
UNWTO Expert Committee Member Madam Xu Fan na-atụ aro "ihe nketa ụwa" nwere mmetụ onwe onye karịa, ma lelee ọgbọ na-esote anya iji mepụta echiche ọhụrụ ọhụụ. Banyere usoro mmepe, o kwuru, "Njem ime obodo dị ka ịkọ na iwe ihe ubi. Ọ chọrọ nlekọta na-aga n'ihu, na elekwasị anya ga-abụ na mmekọrịta ndị ọrụ ugbo na ndị njem nleta na ọ bụghị naanị ego maka ndị ọrụ ugbo. Njem nlegharị anya nke ime obodo na-ekwu banyere ụdị ndụ ime obodo na ọ bụghị akụkụ ya. ”
Onye isi nyocha UNWTO Omar Nawaz dọrọ aka na ntị megide mmepe ngwa ngwa, ebe ọ na-emetụta ogo. “Atụmatụ bụ otu ihe, mana itinye ya n'ọrụ na-ewe oge. Kwesiri inwe echiche dị ogologo oge… mmekọrịta dị n'etiti ime obodo na njem ndị nkịtị, ”ka o kwuru, ma tụọ aro ịmụ site na mmejọ ndị ọzọ. “Gee ntị ma mụta ihe. Adaba na ọhụrụ ina. Gbado anya na mmepe na-esonye, ​​wee zụlite site na nwayọ ngwa ngwa. Ihe ịma aka maka ime njem ime obodo bụ n'ịzụlite ngwa ngwa. ”
Mazi Semone jiri mmepe njem ime obodo na Europe tụnyere Asia Pacific. “Njem njem nlegharị anya nke ime obodo Europe na-etolite na-aga n’ihu kemgbe ihe karịrị otu narị afọ, n’oge oge uto buru ibu. Asia Pacific abanyela naanị na 100 ruo 20 afọ, mana nke a na-enye ohere maka atụmatụ ọhụrụ Asia, "Mr Semone kwuru. Muta ihe site na Europe, ma mee ka ihe di iche na nke Asia. ”
Mazi Semone kwenyere na nkwenkwe ya na ndị Asia anaghị achọ ịme ihe ọ bụla n'agbanyeghị na enwere ọtụtụ ndị okike. “Ndị Asia na-e toomi ihe kama ịnwale ihe dị iche. Ha choro uzo mmepe nke Asia. Ọtụtụ mgbe, mba ndị Eshia na-ejide onwe ha na usoro nnomi, dị ka Laos. Ka anyị mee ihe dị iche. ”
Mazị Semone tụlekwara "Report on International Rural Tourism Development: An Asia Pacific Perspect". "Akuko a bu iji gosiputa ikike njeghari ime obodo ga enyere ndi mmadu aka igbapu ubiam, meziwanye ihe eji ebi ndu ha, ma mee ka ndi mmadu ghara ikwuputa ndi mmadu n'obodo."
Akụkọ ahụ na-akọwa “ime njem ime obodo” dị ka “akụkụ pụrụ iche nke njem njegharị na-adigide ma dị mkpa.” Nchịkọta gụnyere ọnọdụ ime obodo na omume ndị na-adịgide n'ime obodo, ọdịnala ọdịnala, na-eto nwayọ na nke ọma, yana ndị obere ụlọ ọrụ na ezinụlọ ndị metụtara ya.
Ime njem ime obodo nwere ike ịgụnye akụkụ ndị njem nlegharị anya dịka ecotourism, agro-tourism, and geo-tourism. Mr Semone kwuru, "Njem njem ime obodo abụghị akụkụ ahịa ahịa dị mfe ma dị mfe amata."
Ihe ọmụmụ ikpe iri na anọ ọ bụla nwere isiokwu dị iche, ebe ọnọdụ ọnọdụ ha na-adị iche. Agbanyeghị, niile nyochaa amụma na atụmatụ, mmepe ngwaahịa, azụmaahịa na nkwalite, yana mmekọrịta mmadụ na ibe ya na akụ na ụba. Mkparịta ụka mmechi na-enyocha isi nsogbu, ohere, na nkuzi ndị a mụtara.
"Ihe omumu a gosiputara na site na onodu na onodu, onodu ime njem nwere ike meputa uzo ohuru nke ego na obodo na ulo," Mr Semone kwuru.
O kwusiri ike na ọ dị mkpa maka ụdị PPP ọhụrụ - mmekọrịta ndị mmadụ na ọha na eze - nke ndị niile na-ahụ maka ya na-anọchi anya ya. "Nke a bụ echiche ọhụrụ nke na-ama ọkwa ọnọdụ nke ekworo ịsọ mpi na-akwado uru uru."
Nkwupụta ahụ kwubiri na ebe ndị njem na-aga ime obodo chọrọ ịmepụta atụmatụ azụmaahịa na-adigide na usoro nkwado ahịa na-eweta ọnọdụ ha kpọmkwem. Mr Semone chịkọtara, "Enwere ụzọ dị iche iche na otu ebumnuche."
Taa, ọ ga-esiri gị ike ịchọta ngwugwu njem nlegharị anya na ebe nrụọrụ weebụ Thomas Cook, mana ọtụtụ ndị ọbịa si mba ọzọ na-achọ ezumike nwere ahụmịhe na mba ndị ọzọ dị na Eshia, na ime njem ime obodo na-enye ha ụzọ ọzọ maka ịnọ na-arụ ọrụ ma nwee ezigbo ime obodo.
Banglọ nkwari akụ ọhụụ Bangkok Bangkok ma akpọ ya X2 Vibe
Ọrụ ndi oru ugbo elu maka ikwalite njem nlere anya na Nepal